Aiza no misy ny serasera mailaka? | Martech Zone
Alahady Oktobra 25, 2009 Alarobia, Febroary 10, 2016 Adam Small
Nanjary fahazaran-dratsy ratsy aho ny fametrahana mailaka sasany hiasa mandritra ny iray volana na mihoatra. Manana rafitra fitsapana ho an'ny mailaka miditra aho. Raha tsy mitaky ny saiko akaiky na ny fihetsika ataoko izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy hisorohana fanaintainana, avelako hipetraka fotsiny izy ireo. Mety zavatra ratsy izany. Na mety tsia.
Ity lohahevitra iray manontolo ity dia nahatonga ahy hifantoka tamin'ny namako (lasibatry ny "fotoam-piandrasako") momba ny fiovan'ny fampiasana na ny tanjony (na izy roa) amin'ny mailaka. Tsy misy fandalinana siantifika azo resahina eto. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fandinihako manokana amin'ny maha mpampita serasera ahy sy amin'ny maha olona efa ela izay, izay nitaona haingam-pandeha tamin'ny haitao vaovao. (Tsy eo amin'ny sisin'ny tendrony aho, fa eo am-piandohan'ny hantsana malefaka.)
Eritrereto ny fiovan'ny fomba fifandraisantsika amin'ny alàlan'ny fanoratana. Lazaiko fa momba ny be sy ny maro fa tsy ny haitao teknolojia. Tamin'ny andro nandefasanay taratasy fandefasana paositra na telegram indraindray. Fantatray ny fomba hamindrana ireo haingana kokoa amin'ny mpandefa hafatra sy serivisy mandritra ny alina. Ary nisy fax. Rehefa tonga ny mailaka dia nanoratra taratasy toa inona izahay? serasera lava, voamarina tsara, voadidy tsara, tsipelina ary voalamina tsara. Rehefa mandeha ny fotoana dia maro amin'ireo mailaka ireo no lasa liner haingana. Ankehitriny, ny zavatra toy ny SMS, Twitter ary Facebook dia manome antsika ny fohifohy sy ny fahamaotinana izay mamela antsika hitsambikina avy amin'ny zavatra iray mankany amin'ny iray hafa.
Inona no tokony hitranga amin'ny mailaka? Amin'izao fotoana izao dia mbola mijery mailaka ihany aho momba ny atiny lava kokoa, misy dikany ary iray hafa? zavatra izay natao ho ahy na ho an'ny mpandray manokana, fa tsy afaka hambara amin'ny tarehin-tsoratra 140 fotsiny. Mbola ampiasaiko ihany koa ity hijerena vaovao izay nangatahiko. Ary, mazava ho azy, mbola ampiasaiko hiresahana amin'ireo olona mbola tsy nahatratra hafatra sy media sosialy hafa izany.
Raha eo akaiky eo amin'ny toerana misy ahy izy amin'ny fanamarihako dia misy fiatraikany lehibe amin'ny marketing amin'ny mailaka ny fivoaran'ny serasera misy antsika. Ka ahoana ny hevitrao? Mankaiza ny mailaka? Azafady mba omeo hevitra eto ambany. Na, hey, andefaso mailaka aho.
Tags: gidromailaka mahasoa amin'ny findayfanairana amin'ny media sosialyfananganana ekipa
25 Okt 2009 amin'ny 10:52 PM
Heveriko fa hisy foana ny toerana ho an'ny mailaka ... na farafaharatsiny zavatra mitovy amin'ny fomba ifandraisantsika amin'ny mailaka ankehitriny. Mila fitaovana ho an'ny fifandraisana an-tsoratra mivantana amin'ny tsirairay foana izahay, ary misy tranga izay mila antsipiriany kokoa noho ny tarehintsoratra 140 ny zavatra soratanay.
Ny hatsaran'ny teknolojia vao misondrotra dia ny ahafahantsika mampihena ny fikorontanan'ny mailaka amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba hafa amin'ny fifandraisana izay tsy mifanaraka amin'io famaritana io. SMS ho an'ny hafatra fohy eo noho eo, IM ho an'ny hafatra tena izy, Twitter sy Facebook ho an'ny hafatra tokana, RSS handraisana fampandrenesana, Google Wave ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa, sy ny sisa.
25 Okt 2009 amin'ny 10:55 PM
Ekeko fa niova kely ny mailaka saingy tsaroako indraindray fa ao anatin'io vondrona "fampidirana aloha" io aho amin'ny fiandohan'ny curve. Noho izany antony izany, gaga aho indraindray rehefa ampahatsiahivina amin'ny alalan'ny fifaneraserana amin'ny hafa fa maro ny olona mbola "mahazo ny mailaka" fotsiny. Mijery ny mailaka ho toy ny mediam-pifandraisana amin'ny raharaham-barotra semi-formal aho, raha ny Facebook kosa ho an'ny hafatra manokana. Tsy manana kaonty mailaka manokana aho fa kaonty orinasa fotsiny. Ny mailaka ho ahy ihany koa no ivon'ny fampahafantarana… fa tsy ho an'ny fifandraisana fotsiny. Ny gazetiko dia miditra amin'ny alàlan'ny mailaka, ny fampandrenesako, ny hafatra momba ny raharaham-barotra, sns. ary mampiasa ny Inbox Zero aho mba hikarakarana ny zava-drehetra.
26 Oktobra 2009 à 2:33
Ny iray amin'ireo zavatra tena sahirana amin'ny mailaka dia ny fiankinantsika amin'izany. Niantso ahy ny iray tamin'ireo mpanjifako tamin'ity herinandro ity ary nanontany hoe nahoana aho no tsy namaly ny mailaka… dia nisy olona nanomboka voamarika ho SPAM sy tao amin'ny lahatahiry Junk Email-ko.
Mampalahelo fa tsy nivoatra ny mailaka. Tsy manampy ihany koa fa ny mpitahiry mailaka (Microsoft Exchange sy Outlook) dia mbola mandeha amin'ny teknolojia 10 taona. Outlook dia mbola mandika amin'ny processeur teny fa tsy mampifanaraka ny teknolojia vaovao!!!
Ekeko fa manampy ireo teknolojia hafa ireo… fa angamba tena mivavaka tokoa isika mba hisian'ny zava-baovao satria maro ny olana momba ny fiankinan-doha amin'ny mailaka.
26 Okt 2009 amin'ny 1:45 PM
Efa hitanao ve ity lahatsoratra avy amin'i Tim O'Reilly ity?
ity ve no nandrisika ny lahatsoratrao:
26 Okt 2009 amin'ny 9:19 PM
Azoko ny hevitrao na dia efa nihena be aza ny nampiasako ny mailaka, ny ankamaroan'ny namako dia mandefa hafatra ho ahy ao amin'ny kaontiko Social Network. Saingy heveriko fa tsy maty ny mailaka na akaiky ny fahafatesany azo antoka fa misy endri-javatra vaovao nampiana fa mbola ho eto mandritra ny fotoana maharitra.